Mario Monti oo loo magaacabay raiisul wasaaraha Cusub ee wadanka Talyaaniga – SBC
Mario Monti oo loo magaacabay raiisul wasaaraha Cusub ee wadanka Talyaaniga
Posted by Webmaster on Noofember 14, 2011 Comments
Ra’iisul wasaaraha cusub ee wadanka Talyaaniga Mario Monti ayaa qorsheynaya inuu soo magacaabo gole wasiiro oo cusub kuwaasi oo waxka qaban doona Arimaha dhaqaalaha ee wadankaaasi oo meel khatar ah maraya.
Masuulkan cusub oo horey uga soo shaqeeyay Midowga Yurub ayaa sheegay inuu bilaabayao wadahadalo uu wasiiradiisa si wax looga qabto arimahaa dhaqaalaha aan fadhiyin ee wadankaasi talyaaniga.
Raiisul wasaarihii hore ee wadanka Talyaaniga ayaa u sheegay masuulka cusub ee qabtay jagadiisa inuu kala shaqeyndoono habeynta dhaqaalaha wadanka iyo sidoo kale xasilinta Dhaqaalaha wadanka oo kacsan.
Raiisul wasaaraha cusub ee wadanka Talyaaniga oo wariyasha la hadlay ka dib magacabistiisa ayaa waxaa uu sheegay inuu wax badan ka qaban doono hagaajinta dhaqaalaha isaga oo sheegay wadanka dhaqaalihiisa uusan hooseyn balse uu toosan yahay.
Dadka talayaaniga ayaa ka sugaya Masuulkan dhaqaale yaqaanka ah Mario Monti inuu wax ka badelo xaalada wadanka talyaaniga oo uu dhaqaalaha wadanka soo celiyo isaga oo sidoo kale looga fadhiyo inuu dejiyo sidii loo bixin lahaa deymaha dhaqaale ee lagu leeyahay wadanka Talyaaniga.
Wadanka Talyaaniga wuxuu todoobadyadii la soo dhaafay qarka u saarnaa inu la mid noqdo qaar ka mid ah wadamada isticmaala lacagta Uero-da oo dhaqalhooda uu hoose si weyn ugu dhacay